Nezvedu - Owon Technology Inc.
ZigBee Smart Home Zvigadzirwa
Kuchengetedza & Sensor
Smart Kuvaka Sisitimu
IoT Midziyo Yekugadzirisa
Yakavanzika Cloud Kuendeswa
OWON ZigBee Chishandiso kune yechitatu Party Gateway
OWON Gedhi rechitatu Party Party
OWON Technology (chikamu cheLILLIPUT Boka) ndeye ISO 9001: 2015 yakasimbiswa Yekutanga Dhizaini Kugadzira inoshanda mukugadzirwa uye kugadzirwa kwemagetsi uye IoT zvigadzirwa zvine hukama kubvira 1993. inopa zvese zvakajairwa IoT zvigadzirwa uye zvetsika IoT mhinduro dzekushandisa, maTelco, vanoshanda waya, vavaki vepamba, maneja wepfuma, makondirakiti, sisitimu vanobatanidza, uye nzira dzekutengesa.
Padanho remidziyo, pamusoro pekupa akasiyana mamodheru emhando, OWON inogadzira uye inogadzira kunyatsoita zvinodiwa nevatengi kuti zvienderane nezvinangwa zvavo zvehunyanzvi. Padanho rehurongwa, pamusoro penzvimbo dzekuchengetera dzekugara uye dzekutengesa IoT masisitimu, OWON zvakare inopa yakazara Open-API yekubatanidzwa kwehurongwa kuzadzisa vavariro dzevamwe vedu dzebhizinesi.
- - Professional ODM Service -
- Chinja pfungwa dzako kuchigadzirwa kana sisitimu
OWON ine ruzivo rwakanyanya mukugadzira uye kugadzirisa zvigadzirwa zvemagetsi zvinotsanangurwa nezvinodiwa nemutengi. Tinogona kupa yakazara-mutsara R&D technical services inosanganisira maindasitiri & dhizaini dhizaini, Hardware & pcb dhizaini, firmware & software dhizaini, pamwe nehurongwa hwekubatanidzwa.
—— Inodhura-Inoshanda Sevhisi Yekugadzira—
- Govera izere-pasuru sevhisi kuti uwane rako bhizinesi chinangwa
OWON yanga ichingogadzira vhoriyamu kugadzirwa kwezvose zvakaenzana uye zvakagadzirwa zvigadzirwa zvemagetsi kubvira 1993. Mumakore ese, OWON yakaunganidza ruzivo rwakawanda uye kugona mukugadzira zvigadzirwa, senge Mass Production Management, Supply Chain Management, Total Quality Management, nezvimwe.
● Matekiniki anotungamirwa netekinoroji ayo anoita kuti kugona kweR & D kugadziriswe.
● Makore makumi maviri ezviitiko zvekugadzira akatsigirwa neakakura uye anoshanda anopa cheni.
● Yakagadzikana uye isingachinji mashandiro evashandi pamwe nekushingairira kushanda kwevashandi nekuda kwetsika yemakambani ye "Vakatendeseka, Kugovana uye Kubudirira".
● Iko kusanganiswa kwe "Kuwanika kweMunyika Yose" uye "Yakagadzirwa muChina" kunovimbisa iyo yepamusoro-chikamu kugutsikana kwevatengi pasina kupa mutengo mutengo unoshanda.
- 130 Commerce Nzira, Walnut, CA 91789, USA
Yakabatana Imba uye IoT: Musika Mukana ...
Hupenyu Huri nani neOWON Smart Kumba
OWON kuIchinomwe China (Shenzhen) Internati ...
OWON ichave iri Yechinomwe China (Shenzhen) I ...
ZigBee 3.0: Iyo Foundation yeiyo Yemukati ...